MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Media Advisory for Myanmar-Norway Foreign Ministers’ Joint Press
နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Børge Brende ၏ခရီးစဉ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအကြား ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
၁။ နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Børge Brende သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့မှ ၆ ရက်နေ့အထိ လာရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှစ်ဦးတို့သည် ၆-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၀၉၃၀) နာရီ အချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရန် ရှိပါသည်။ တွေ့ဆုံမှုအပြီး (၁၀၁၅) နာရီတွင် ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကျင်းပရာတွင် ဝန်ကြီးနှစ်ဦးက (၄-၅) မိနစ်ခန့်စီ ဦးစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းနောက် အမေး၊ အဖြေကဏ္ဍကို ဆက်လက်ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် အချိန်ကန့်သတ်မှုကြောင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးတို့အနေဖြင့် မီဒီယာများဘက်မှ (၄)ဦး၊ တစ်ဦးလျှင်မေးခွန်း (၁)ခုစီဖြင့် စုစုပေါင်းမေးခွန်း(၄)ခုကို ဖြေကြား သွားရန်ရှိပါသည်။ မေးခွန်းများကို တိုတိုနှင့် လိုရင်း မေးမြန်းကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၄။ ယခုခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်နေသော ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးသွားဖွယ် ရှိပါသည်။